အမျိုးသမီးအားလုံး ရှဲယူ မှတ်ထားသင့်တဲ့ သူများယောင်္ကျားကို အလစ်သုတ်ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ကမများကို ပညာပေးနည်း... - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / အမျိုးသမီးအားလုံး ရှဲယူ မှတ်ထားသင့်တဲ့ သူများယောင်္ကျားကို အလစ်သုတ်ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ကမများကို ပညာပေးနည်း...
အမျိုးသမီးအားလုံး ရှဲယူ မှတ်ထားသင့်တဲ့ သူများယောင်္ကျားကို အလစ်သုတ်ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ကမများကို ပညာပေးနည်း...
Apann Pyay 12:42 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
အမျိုးသမီးများအားလုံး မှတ်သားထားသင့်တဲ့ Post ကောင်းလေးပါ..
မယားငယ် - ဟယ်လို၊ ဦးကျော်ရဲ့ မိန်းမပါလား
မယားငယ် - သူမကွာရှင်းဘဲနဲ့ ကျွန်မက သူနဲ့ ဘယ်လိုလက်ထပ်လို့ရမှာလဲ
မိန်းမ - Sorry. အဲဒါသူ့ကိစ္စပါ
မယားငယ် - သူကရှင့်ကိုတောင် မချစ်တော့တဲ့ဟာ ရှင်မကွာပေးဘူးလား။ ရှင့်နေရာမှာ ကျွန်မသာဆို အစောတည်းက ကွာပေးလိုက်ပီ
မိန်းမ - သြော်ဟုတ်လား။ ကွာတာမကွာတာ ကျွန်မကိစ္စပါ
မယားငယ် - ရှင်ငကြောင်ပဲ
မိန်းမ - သူခိုးကလူဟစ်လို့ရှင်
မယားငယ် - ရှင်မကွာပေးဘဲ နေတော့ရော သိသိကြီးနဲ့ ရှင်ဒီလို နေရတာကောင်းမလားရှင့်
မိန်းမ - ဒါကျွန်မကိစ္စပါ။ ကျွန်မကျေနပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လဲ
မယားငယ် - ကျွန်မသူနဲ့ နေ့တိုင်းတွေ့တယ်။ အရမ်းချစ် အရမ်းကို ယုယကြင်နာတာ နေ့တိုင်းပဲ
မိန်းမ - အဲဒါရှင်တို့ကိစ္စလေ။ ကျွန်မကို အစီရင်ခံနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှင်အစီရင်ခံမှတော့ ကျွန်မက ခွင့်ပြုပေးရမှာပေါ့။ တစ်ခုပဲ သတိပေးလိုက်မယ်။ နောက်ကလေးရှိမှ မီးဖွားစရိတ်မရှိဖြစ်နေအုံးမယ်နော့
မယားငယ် - ကျွန်မတို့မှာ ကလေးမွေးစရာ ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ရှင့်ကို ဘယ်သူပြောလဲ။
မိန်းမ - သိတာပေါ့။ ကျွန်မယောက်ျားရဲ့ ပိုက်ဆံတွေအကုန် ကျွန်မကို သူအပ်ရတာလေ။ ရှင့်ကို ပေးတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒါ ကျွန်မ နှုတ်ဆိတ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံပဲ။ ယောက်ျားတွေဆိုတာ ဒီလိုပဲလေ ထမင်းစားရတာ များတော့လည်း အချို အချဉ်လေး ပြောင်းစားချင်ကြတာပေါ့။ အမှိုက်တွေမှန်း သိပေမယ့်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ထိန်းနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ကျွန်မကလည်း သူ့ကို အဲဒီ အမှိုက်စားဖို့ မုန့်ဖိုးလောက်တော့ ပေးရတော့တာပေါ့။ နောက်ပြီး ရှင်ကရော သူရှင်နဲ့ တကယ် ကလေးမွေးချင်ပါတယ်လို့ ရှင်ထင်နေတာလား
မယားငယ် - ကျွန်မမွေးကို မွေးဦးမယ်။ ရှင်ကွာမလား မကွာမလား စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။
မိန်းမ - မကွာပါဘူး။ ရှင်မွေးပီးတဲ့ အခါမှသာ။ ကျွန်မကို ဖုန်းဆက်လိုက်။ ကျွန်မ တရားရုံးကသူတွေနဲ့ လာခဲ့မယ်။ လင်ခိုးမှုနော်။ ရှင်သုံးခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ကျွန်မကို ပြန်ပေးရမှာ......ရှင့်ကလေးကို မွေးပီးမှ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်တဲ့သူမရှိ ဖြစ်မှာမကြောက်ဘူးဆိုရင် မွေးသာမွေး။ အဲဒါ ရှင့်ကိစ္စပဲ
မယားငယ် - ရှင့်ယောက်ျား အခြားမိန်းမနဲ့ အတူတူနေတာကို ရှင်လက်ခံနိုင်လို့လား။
မိန်းမ - လက်ခံနိုင်တာပေါ့။ ပိုက်ဆံမပေးရတဲ့ကြက်က ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ကြက်ထက် အများကြီးသက်သာတယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်မ ယောက်ျားက အဲလိုချွေတာလိုက်လို့ ပိုထွက်လာတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ကျွန်မလည်း ကြက်ကလေး ဘာလေးဝယ်ပေါင်း ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားဖြည့်လို့ရတာပေါ့
ဒီမှာတင်ပဲ မယားငယ်ဟာ ငိုပြီးဖုန်းချသွားသတဲ့ကွယ်
ကဲ မမ တို့ ညီမလေး တို့ ရေ Fighting.....
အမြိုးသမီးမြားအားလုံး မှတျသားထားသငျ့တဲ့ Post ကောငျးလေးပါ..
မယားငယျ - ဟယျလို၊ ဦးကြျောရဲ့ မိနျးမပါလား
မိနျးမ - ဟုတျပါတယျ ဘယျသူပါလဲ
မယားငယျ - ကြှနျမ သူ့ခဈြသူပါ။ ရှငျ့ယောကျြားကို ကြှနျမ ခဈြမျိသှားလို့ရှငျ့။ အဲဒါ သူနဲ့လကျထပျမလို့။
မိနျးမ - ကောငျးတာပေါ့။ Congratulation ပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါရှငျ့ကိစ်စလေ
မယားငယျ - သူမကှာရှငျးဘဲနဲ့ ကြှနျမက သူနဲ့ ဘယျလိုလကျထပျလို့ရမှာလဲ
မိနျးမ - Sorry. အဲဒါသူ့ကိစ်စပါ
မယားငယျ - သူကရှငျ့ကိုတောငျ မခဈြတော့တဲ့ဟာ ရှငျမကှာပေးဘူးလား။ ရှငျ့နရောမှာ ကြှနျမသာဆို အစောတညျးက ကှာပေးလိုကျပီ
မိနျးမ - သွျောဟုတျလား။ ကှာတာမကှာတာ ကြှနျမကိစ်စပါ
မယားငယျ - ရှငျငကွောငျပဲ
မိနျးမ - သူခိုးကလူဟဈလို့ရှငျ
မယားငယျ - ရှငျမကှာပေးဘဲ နတေော့ရော သိသိကွီးနဲ့ ရှငျဒီလို နရေတာကောငျးမလားရှငျ့
မိနျးမ - ဒါကြှနျမကိစ်စပါ။ ကြှနျမကနြေပျတယျ။ ဘာဖွဈလဲ
မယားငယျ - ကြှနျမသူနဲ့ နတေို့ငျးတှတေ့ယျ။ အရမျးခဈြ အရမျးကို ယုယကွငျနာတာ နတေို့ငျးပဲ
မိနျးမ - အဲဒါရှငျတို့ကိစ်စလေ။ ကြှနျမကို အစီရငျခံနစေရာမလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရှငျအစီရငျခံမှတော့ ကြှနျမက ခှငျ့ပွုပေးရမှာပေါ့။ တဈခုပဲ သတိပေးလိုကျမယျ။ နောကျကလေးရှိမှ မီးဖှားစရိတျမရှိဖွဈနအေုံးမယျနော့
မယားငယျ - ကြှနျမတို့မှာ ကလေးမှေးစရာ ပိုကျဆံမရှိဘူးလို့ ရှငျ့ကို ဘယျသူပွောလဲ။
မိနျးမ - သိတာပေါ့။ ကြှနျမယောကျြားရဲ့ ပိုကျဆံတှအေကုနျ ကြှနျမကို သူအပျရတာလေ။ ရှငျ့ကို ပေးတာရှိခဲ့မယျဆိုရငျတောငျ အဲဒါ ကြှနျမ နှုတျဆိတျခှငျ့ပွုခဲ့တဲ့ ပိုကျဆံပဲ။ ယောကျြားတှဆေိုတာ ဒီလိုပဲလေ ထမငျးစားရတာ မြားတော့လညျး အခြို အခဉျြလေး ပွောငျးစားခငျြကွတာပေါ့။ အမှိုကျတှမှေနျး သိပမေယျ့လညျး ကိုယျ့စိတျကိုယျ ထိနျးနိုငျကွတာမဟုတျဘူးလေ။ ဒီတော့ ကြှနျမကလညျး သူ့ကို အဲဒီ အမှိုကျစားဖို့ မုနျ့ဖိုးလောကျတော့ ပေးရတော့တာပေါ့။ နောကျပွီး ရှငျကရော သူရှငျနဲ့ တကယျ ကလေးမှေးခငျြပါတယျလို့ ရှငျထငျနတောလား
မယားငယျ - ကြှနျမမှေးကို မှေးဦးမယျ။ ရှငျကှာမလား မကှာမလား စောငျ့ကွညျ့ကွတာပေါ့။
မိနျးမ - မကှာပါဘူး။ ရှငျမှေးပီးတဲ့ အခါမှသာ။ ကြှနျမကို ဖုနျးဆကျလိုကျ။ ကြှနျမ တရားရုံးကသူတှနေဲ့ လာခဲ့မယျ။ လငျခိုးမှုနျော။ ရှငျသုံးခဲ့တဲ့ ပိုကျဆံတှေ အကုနျကြှနျမကို ပွနျပေးရမှာ......ရှငျ့ကလေးကို မှေးပီးမှ ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျတဲ့သူမရှိ ဖွဈမှာမကွောကျဘူးဆိုရငျ မှေးသာမှေး။ အဲဒါ ရှငျ့ကိစ်စပဲ
မယားငယျ - ရှငျ့ယောကျြား အခွားမိနျးမနဲ့ အတူတူနတောကို ရှငျလကျခံနိုငျလို့လား။
မိနျးမ - လကျခံနိုငျတာပေါ့။ ပိုကျဆံမပေးရတဲ့ကွကျက ပိုကျဆံပေးရတဲ့ကွကျထကျ အမြားကွီးသကျသာတယျ မဟုတျလား။ ကြှနျမ ယောကျြားက အဲလိုခြှတောလိုကျလို့ ပိုထှကျလာတဲ့ ပိုကျဆံနဲ့ ကြှနျမလညျး ကွကျကလေး ဘာလေးဝယျပေါငျး ပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ အားဖွညျ့လို့ရတာပေါ့
ဒီမှာတငျပဲ မယားငယျဟာ ငိုပွီးဖုနျးခသြှားသတဲ့ကှယျ
ကဲ မမ တို့ ညီမလေး တို့ ရေ Fighting.....